အိပ်စက် အနားယူသင့်တဲ့ ကြာချိန် – Gentleman Magazine
တရက် ၈ နာရီအိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဆိုဟာ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြား အားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်တယ်ဆို သင် မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ “Nationanl Sleep Foundation” လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ အသက်အလိုက် အိပ်သင့်သည့် ကြာချိန် များကို ဖော်ပြသွားပေးပါမယ်။
မွေးကင်းစ မှ ၃ လ အထိ – ၁၄ နာရီ မှ ၁၇ နာရီ
၄ လ မှ ၁၁ လ အထိ – ၁၂ နာရီ မှ ၁၅ နာရီ
၁ နှစ် မှ ၂ နှစ် အထိ – ၁၁ နာရီ မှ ၁၄ နာရီ
၃ နှစ် မှ ၅ နှစ် အထိ – ၁၀ နာရီ မှ ၁၃ နာရီ
၆ နှစ် မှ ၁၃ နှစ် အထိ – ၉ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ
၁၄ နှစ် မှ ၁၇ နှစ် အထိ – ၈ နာရီ မှ ၁၀ နာရီ
၁၈ နှစ် မှ ၆၄ နှစ် အထိ – ၇ နာရီ မှ ၉ နာရီ
၆၅ နှစ် အထက် – ၇ နာရီ မှ ၈ နာရီ
အကယ်၍ သင်ဟာ သတ်မှတ်အချိန်ထက် အိပ်ရန် အခက်အခဲများရှိနေတယ်ဆုိုရင် ချယ်ရီသီး ဖျော်ရည်သောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် အိပ်ချိန် မိနစ် ၉၀ လောက်ပိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချယ်ရီမကြိုက်တက်တဲ့သူများကတော့ ကီဝီသီး ဒါမှမဟုတ် ပင်လယ်ရေညှိစားပေးခြင်းအားဖြင့် အိပ်ပျော်မှုကို အထောက်အကူရစေနိုင်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး . ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့ . . .
တဈရကျ ဘယျလောကျကွာကွာအိပျသငျ့သလဲ ?
တရကျ ၈ နာရီအိပျရမယျဆိုတဲ့ အဆိုဟာ အသကျအရှယျ အပိုငျးအခွား အားလုံးအတှကျရညျရှယျတယျဆို သငျ မှားသှားပါလိမျ့မယျ။ “Nationanl Sleep Foundation” လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြမြားအရ အသကျအလိုကျ အိပျသငျ့သညျ့ ကွာခြိနျ မြားကို ဖျောပွသှားပေးပါမယျ။
မှေးကငျးစ မှ ၃ လ အထိ – ၁၄ နာရီ မှ ၁၇ နာရီ
၄ လ မှ ၁၁ လ အထိ – ၁၂ နာရီ မှ ၁၅ နာရီ
၁ နှဈ မှ ၂ နှဈ အထိ – ၁၁ နာရီ မှ ၁၄ နာရီ
၃ နှဈ မှ ၅ နှဈ အထိ – ၁၀ နာရီ မှ ၁၃ နာရီ
၆ နှဈ မှ ၁၃ နှဈ အထိ – ၉ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ
၁၄ နှဈ မှ ၁၇ နှဈ အထိ – ၈ နာရီ မှ ၁၀ နာရီ
၁၈ နှဈ မှ ၆၄ နှဈ အထိ – ရ နာရီ မှ ၉ နာရီ
၆၅ နှဈ အထကျ – ရ နာရီ မှ ၈ နာရီ
အကယျ၍ သငျဟာ သတျမှတျအခြိနျထကျ အိပျရနျ အခကျအခဲမြားရှိနတေယျဆုိုရငျ ခယျြရီသီး ဖြျောရညျသောကျပေးခွငျးအားဖွငျ့ အိပျခြိနျ မိနဈ ၉၀ လောကျပိုပေးမှာဖွဈပါတယျ။ ခယျြရီမကွိုကျတကျတဲ့သူမြားကတော့ ကီဝီသီး ဒါမှမဟုတျ ပငျလယျရညှေိစားပေးခွငျးအားဖွငျ့ အိပျပြျောမှုကို အထောကျအကူရစနေိုငျပါတယျ။
မိနျးကလေးတိုငျး တောငျ့တပွီး . ယောကျြားလေးတိုငျး အားကစြဖေို့ . . .
Previous: ဘီယာဘာ ကြောင့်သောက်သင့် တာလဲ
Next: ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေဖို